Iyo nyowani vhezheni yeLXQt desktop, vhezheni 0.11 yave kuwanikwa kune wese munhu | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva ano takaona akati wandei madhizaikisi anozivikanwa seGnome kuvhura vhezheni itsva dzematafura avo, asi kwete chete mapurojekiti ane mukurumbira akazviita. Iyo projekiti yakazvininipisa inozivikanwa seLXQt zvakare ine vhezheni yayo nyowani, mune ino kesi inozivikanwa seLXQt 0.11.
Iyi purojekiti inovavarira kuve ramangwana reLXDE desktop, desktop isina huremu yakavakirwa paOpenBox semaneja wewindows uye zvimwe zvishandiso kusvikira basa reDesktop rapera, semamwe mapurojekiti akakura seGnome kana KDE.
LXQt inoitirwa kuve LXDE yakashandurwa kumaraibhurari eQT, maraibhurari ayo achavandudza mashandiro edesktop pamwe ne zviwanikwa zvemidziyo. Mune ino kesi, LXQt 0.11 ine akawanda mabhugi akagadziriswa, chimwe chinhu chinoita kuti mashandiro ayo asimudzirwe kune vazhinji vashandisi. Yakagadziriswawo dambudziko riripo neiyo screensaver application. Nyaya yakakonzera kuti zvimwe zvikwata zvive nezvinetso nekumiswa kwechikwata.
LXQt 0.11 inovandudza mamwe madudu uye matambudziko nemamwe mapurogiramu pamwe nekugadziriswa
Kuburitswa uku kunoisa kukoshesa kwakanyanya pane windows maneja marongero. Nekudaro, nepo Openbox ichitongwa nekugadziriswa kweiyo xml faira, izvozvi Lqxt-Config zvirinani inoenderana iyi faira kubvumira kurongeka kuri nani uye kukuru. Iwo manejimendi manejimendi kuburikidza nePulseaudio akagadziriswawo, iine kuita kuri nani. Kunze kweiyo github repository chakagoneswa kuve nemadhodhi edesktop akachinjwawo kuti ashandiswe nemazvo nevatungamiriri vekugovera avo vanoda kuushandisa. Kunyanya yekuvakwa kwakakosha mapakeji edesktop.
Izvi zvichaita kuti migove mizhinji ikwanise shandisa shanduro nyowani yedesktop kunyange hazvo kugoverwa kwakawanda kwakadai saLubuntu kuri kutoshanda neiyo yapfuura vhezheni yeLXQT, vhezheni yakatsiga kana kuti yakanyanya kugadzikana kusvika pakaburitswa iyi vhezheni.
Kunyangwe mapurojekiti makuru anowanzo shandiswa zvakanyanya, ichokwadi kuti madhesiki madiki ari kuwedzera kushanda uye kuwedzera kuwedzera kushandiswa, sezvakaratidzwa naLubuntu kana Manjaro. Chero zvazvingaitika, Linux inotibvumidza kuti tigadzirise chinenge zvese, iyo inosanganisirwa desktop uye tinogona kugara tichisarudza kushandisa Gnome kana iyo KDE isingafadzi kana, nekusiyana, sarudza isina kureruka LXQt Unosarudza chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Iyo nyowani vhezheni yeLXQt desktop, vhezheni 0.11 yave kuwanikwa kune wese munhu
Zvakanaka, handigone kukuudza kuti ndakafambira mberi muLinux. Asi makore matanhatu apfuura ini ndakaenda kuDebian, ndapfuura kuburikidza neUbuntu uye mamwe akawanda ma distros. Uye Debian inongondipa kugutsikana mushure mekugutsikana. Naizvozvo kana zviri mune zvako zvehunyanzvi mikana yekugona iyi distro ... hauzombozvidemba.
Diego De Santiago Ruiz akadaro
Wataura chokwadi, ini ndiri kumhanya ubuntu MATE, asi ini ndinoda debian.
Pindura Diego De Santiago Ruiz
Ndinozviona zvichinakidza, ndinofarira akareruka uye madhesiki akareruka uye kana ndikasashandisa Lxde kana E17 imhaka yekuti ini ndinovawana vangave vakanyanya kana hafu vapedza. Kana Lxqt ikagadzikana uye ikashanda zvakakwana, handitonge kunze zvachose sedesktop huru.